2022 - Puntland Mirror Believable Media Website
January 17, 2022 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed ee Puntland ayaa galabta oo Isniin ah soo saaray liiska guddiyada soo xulaya doorashada shanta kursi ee ugu horeysa ee baarlamaanka federaalka. Kuraasta la soo saaray ayaa […]
January 9, 2022 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kadib in ka badan asbuuc oo ay Muqdisho kulamo kulahaayeen, madaxda Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka iyo Raysulwasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray bayaan ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa hanaanka doorashada. […]
January 3, 2022 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Kulanka oo shir guddoominayo Raysulwasaare Maxamed Xusenn Roobel ayaa waxaa ka qeybgalay madaxda Dowladdaha Xubnaha ka ah […]
January 2, 2022 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC) Guuleed Saalax Bare ayaa manta oo Axad ah is-casilay, sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook-ka. “Saaka waxaan ugudbiyay Xubnaha Guddiga KMG […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay dagaal u dhaxeeya labbo maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaanka Saax-maygaag saakay oo Axad ah, sida ilo-wareedyo ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Dagaalkan oo […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa $50 milyan oo taageero maaliyadeed ah ka heshay Sucuudi Caraabiya, sida uu xaqiijiyay Raysulwasaaraha Soomaaliya. Xasan Cali Khayre ayaa bayaan uu soo saaray shalay oo Talaado ahayd waxa uu uga mahadceshay taageerada [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Janaraal Siciid Maxamed Xirsi oo loo yaqaan Siciid Dheere, ayaa lagu waramayaa in uu qorsheynayo in uu u tartamo madaxweynaha Puntland ee doorashada 2019-ka. Ilo-wareed ka ag-dhow Janaraalka, ayaa warsidaha Puntland Mirror u [...]